Shanduko, Distribution Shanduri, Oiri-Yakanyudzwa Shanduko - Fuda
Isu tinotenda kuti sekureba sekunge iwe uchinzwisisa chigadzirwa chedu, iwe unofanirwa kunge uchida kuva vanobatana nesu.
Iyo kambani yakavambwa muna 2000. Mushure memakore gumi ekuedza pamwe nekusimudzira, rave bhizimusi hombe mudunhu.
5kV transformer uye inotevera S9 transformer, S11 transformer akateedzana mafuta akanyudzwa simba magemura: SCB akateedzana resin kuputira yakaoma mhando shanduri, nezvimwe.
Iyo kambani yakabudirira kupfuura iyo ISO9001 / 2000 yemhando yepamusoro manejimendi sisitimu yekuongorora iyo yakaongororwa neMody kambani munaNdira 2010
Shandong Fuda Shanduko Co, Ltd. inopa akasiyana siyana mushure mekutengesa sevhisi kubva ku commisioning sevhisi, cheki cheki, kugadzirisa uye kugadzirisa.
Shandong Fuda Transformer Co, Ltd. ibhizimusi rinogadzira kugadzirwa, kuvandudza uye kutengesa kweakaomesesa-mhando ma transformer, magetsi anoshandura, mafuta-akanyudzwa ma transformer, amorphous alloy transformers, 10kV ma transformer, 35kV ma transformer, mabhokisi ma transformer uye zvigadzirwa zvinotsigira.
For anobvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya kwatiri uye tichava nekuonana mukati 24hours.
Zvigadzirwa zvikuru zvekambani: 35kV transformer uye inotevera S9 transformer, S11 transformer akateedzana mafuta akanyudzwa simba magemeta: SGB, SCB akateedzana resin kuputira yakaoma yakaoma mhando ma transformer; Pre-akaisirwa ma transformer (European, American), akakosha ma transformer, nezvimwe.
Iyo yakakwana michina yekambani uye yekugadzira tekinoroji, kuomesa kuyedza nzira, yakasimba tekinoroji simba, sainzi uye yakaoma dhizaini dhizaini, simbisa kupa vatengi kugona, hwakavimbika mhando, yepamusoro mashandiro emagetsi zvigadzirwa.
SH15 akateedzana amorphous chiwanikwa zvakazara akanyudzwa tran ...